त्रिविमा प्राध्यापक नियुक्ति विरुद्ध मुद्दा,रजिस्ट्रारसहितको बढुवा रोकियो
१३ साउन, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको प्राध्यापक बढुवा पनि विवादमा परेको छ ।
क्र्मचारी भर्तीमा अनियमिता गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर भष्टाचारसम्बन्धी मुद्धाको किनारा नलाग्दै प्राध्यापक बढुवा पनि विवादित भएको हो ।
विश्वविद्यालय र सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुले आफूअनुकुल नियम बनाउँदै प्राध्यापक बढुवा गरेको र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएको आरोप लागेको छ । अर्थशास्त्र (शिक्षा), तथ्यांकशास्त्र (मानविकी), स्वास्थ्य, जनसंख्यालगायत विषयमा प्राध्यापक बढुवा गर्दा मनपरी गरेको आरोपसहित त्रिविकै पुनरावेदन आयोगमा उजुरी परेको छ ।
हालै सह–प्राध्यापकबाट बढुवा भएका विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीको नियुक्ति पनि यही आरोपका कारण रोकिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापकमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका अन्यलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेपनि रजिस्ट्रार उप्रेतीका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अर्थशास्त्रका सह– प्राध्यापक उपेती र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सह–प्राध्यापक नूरजंग केसीलाई गत चैत २४ गते प्राध्यापक बढुवा गर्न त्रिवि सेवा आयोगले सिफारिस गरेको थियो । प्राध्यापकमा बढुवाका लागि उप्रेती र केसीसँगै प्रतिस्पर्धी सह– प्राध्यापकद्वय नरेन्द्र कटुवाल र दिलनाथ फुयालले उक्त सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन् । सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्टबाट
मुना हत्या प्रकरण : गम्भीर प्रश्न ! एक्लै विजयले त्यस्तो काम कसरी गरे ?
७ फागुन, काठमाण्डौं । डेढ साताअघि पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको पत्नी…
आत्महत्या गर्न लागेका युवकलाई बचायो फेसबुकले
७ फागुन, काठमाडौँ । छुराले छातीमा हानेर आत्महत्या गर्न लागेका…
कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गरिएका मध्ये सबैको नेगेटिभ
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र अनुदान वितरण गर्ने